I-EKG GUY: I-Ultimate EKG Breakdown Course 2021 | I-Medical Video Cou ...
I-EKG GUY: I-Ultimate EKG Breakdown Course 2021
Ukufunda ukutolika ama-EKG kwakungumzabalazo kimi. Ngikhumbula ngifika ekhaya kunqwaba yama-EKG ubaba wami (udokotela wenhliziyo ongenelelayo) owayengishiyele ukuba ngihumushe. Bengingazi ukuthi ngizoqala ngaphi. Ngangilahlekile. Konke engikubonile kwakuyimigqa e-squiggly.
Ngaqala ukufunda zonke izincwadi ezethula (ezakwaDubin, ezikaThaler, njll.) Kanye nanoma iyiphi insiza engangibamba ngayo. Azikho izinsizakusebenza ezikwenzile ngempela futhi azizange zinikeze ukuhambisana okuningi kwemitholampilo. Ngazithola ngifunda izincwadi zokufunda (ezakwaChou, ezikaMarriott, njll.) Kanye nezincwadi zokwelapha ukuvala izikhala. Ekugcineni, le bekuyinqubo engasebenzi kahle.
Nginqume ukuthuthukisa uhlelo lwezifundo lwabafundi engikanye nabo kwezokwelapha. Ngidale amavidiyo. Ngasizathu simbe, abafundi bacele okwengeziwe. Abantu abavela emhlabeni wonke bacele okwengeziwe. Ekugcineni kwaba namakhulu ama-video. Umphakathi we-EKG Guy wadalwa. Futhi ngenxa yakho, manje sesikhulile saba ngaphezu kwabalandeli abangama-750,000 ezinyangeni ezingaphansi kwezingu-18 ukuba sibe umphakathi omkhulu kunayo yonke, okhula ngokushesha we-ECG emhlabeni! Ngasheshe ngabona ukuthi mhlawumbe kwakungemina ngedwa owayenenkinga yokufunda ama-EKG, noma okungenani wayefuna inketho engcono.
Ngakho konke okushiwo, kuyacaca ukuthi ochwepheshe bezokwelapha bafuna izinketho ezingcono zokufunda ze-ECG futhi ngethemba ukuthi ngikunikeze lokho. Futhi, mhlawumbe kwakungeyimi ngedwa owayedonsa kanzima. Ngiyethemba ukuthi akekho noyedwa oyobe elwela ukufunda ama-ECGs futhi.
Ngifuna ukunibonga ngokuxhaswa kwenu okuqhubekayo. Kusho lukhulu. Siyabonga ngokusisiza ukuguqula imfundo ye-ECG ukuletha ukunakekelwa okungcono kweziguli!
- I-EKG Guy (U-Anthony Kashou, MD)
I-EKG Guy's Ultimate EKG Breakdown yenzelwe abantu abangenalwazi oluncane nge-electrocardiogram (EKG, ECG), kanye nabahumushi abaphambili kakhulu. Lesi sifundo esibanzi samahora angama-25 + sifaka izinkulumo ezingaphezu kwezingu-150 ezimboza izihloko ezibaluleke kakhulu ze-ECG. Ilungele abafundi, abahlali, abahlengikazi, abafo, abezimo eziphuthumayo, nabanye ochwepheshe bezokwelapha lapho kufundiswa khona i-ECG.
Imiqondo nezisekelo eziyisisekelo zizohlinzeka ngesisekelo esiqinile se-ECG njengoba uqhubeka nomsebenzi wakho. Ngesikhathi uqeda lolu chungechunge lwezifundo, uzoba nolwazi oluningi njengodokotela abaningi abahlala ezingeni lokungena (kanye nabafo bezenhliziyo!).
Ingxenye I: Okuyisisekelo
Engxenyeni yokuqala yale nkambo, sibheka izisekelo ze-electrocardiogram (ECG, EKG). Sidingida ukwakheka komzimba nokujikeleza kwegazi, uhlelo lokuqhuba ngogesi lwenhliziyo, ama-electrode namavekta, izici ezahlukahlukene zomjikelezo wenhliziyo ojwayelekile, kanye nemiqondo ebalulekile okufanele uyazi lapho uhumusha i-EKG ehola nge-12.
Ingxenye II: Isigqi
Engxenyeni yesibili yenkambo, sibheka izigqi ezahlukahlukene. Le ngxenye yencwadi yehlukaniswe nesinus, atrial, atrioventricular, kanye ne-ventricular rhythms. Lezi zihloko zifaka phakathi i-pathophysiology, indlela, izici ze-ECG, nokubaluleka komtholampilo kwesigqi ngasinye.
Ingxenye III: Ukukhuliswa Kwamagumbi
Engxenyeni yesithathu yenkambo, sixoxa ngezinhlobo ezahlukahlukene zokwandiswa kwe-atrial ne-ventricular. Lezi zihloko zifaka phakathi i-pathophysiology, indlela, izici zokuxilonga ze-ECG, nokubaluleka komtholampilo ngakunye.
Ingxenye IV: Iziphambeko Zokuqhuba
Engxenyeni IV yalezi zifundo, sibheka iziphambeko ezahlukahlukene zokuqhuba - kufaka phakathi, amabhlogo ahlukile we-atrioventricular kanye ne-intraventricular conduction. Lezi zihloko zifaka phakathi i-pathophysiology, indlela, izici ze-ECG, nokubaluleka komtholampilo ngakunye.
Ingxenye V: I-Myocardial Ischemia & Infarction
Ngokwengxenye V yenkambo, sibheka i-myocardial ischemia ne-infarction. Lesi sigaba sifaka ukubuka konke okuyisisekelo kwe-myocardial ischemia, kungani okutholwe yi-ECG kwenzeka ekusethweni kwe-ischemia, yiziphi izinguquko ezibhekwa njengezibalulekile, i-coronary anatomy anatomy, ukuthi ungazitholela kanjani izikhala zomthambo we-coronary ohlukile nokubaluleka komtholampilo, ukukhubazeka okuhlukahlukene kokungena okungenzeka ku ukubekwa kwe-infarction ye-myocardial, phakathi kokunye okutholwe yi-ECG ezimeni ezithile ze-ischemic.
Ingxenye VI: Izidakamizwa nama-Electrolyte
Ngokwengxenye VI yalezi zifundo, sibheka okutholakele kwe-ECG okubonwa yizinkinga ezivamile ze-electrolyte nemithi. Lokhu kufaka phakathi ukuthi imithi ethile isebenza kanjani, ukubaluleka kwayo emtholampilo, kanye nezinguquko ze-ECG emazingeni ajwayelekile anobuthi.
Ingxenye VII: Izinto ezenziwe ngobuciko
Engxenyeni ye-VII yalezi zifundo, sibheka izinto zobuciko ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinhlobo ezahlukahlukene zokubuyiselwa emuva komthofu nokuthi ungazibona kanjani ku-ECG.
Ingxenye VIII: Ukuphazamiseka Kwe-Arrhythmia Disk
Ngokwengxenye ye-VIII yalezi zifundo, sibheka izinhlobo ezithile zokuphazamiseka kwe-arrhythmia ezuzwe njengefa, kufaka phakathi i-pathophysiology, ukutholakala kwe-ECG, izici zokuxilonga, nokubaluleka komtholampilo.
Ingxenye IX: Okuxubile
Ngokwengxenye i-IX yalezi zifundo, sibheka izimo eziningana zomtholampilo ezibalulekile nezici ze-ECG ezingabonakala ngakunye. I-pathophysiology nokubaluleka komtholampilo nakho kuyanikezwa lapho kufanele khona.
Ingxenye X: Isifo Senhliziyo Esizalwa Naso
Engxenyeni X yale nkambo, sibheka izifo ezahlukahlukene zokuzalwa kwenhliziyo. Ngesihloko ngasinye, sixoxa nge-pathophysiology, izici ze-ECG, kanye nokubaluleka komtholampilo nokubikezela.
I-EKG GUY Ultimate EKG Breakdown Course
I-EKG GUY Ultimate EKG Breakdown Course 2021
Isifundo Sokuqedwa Sokugcina se-EKG
I-Ultimate EKG Breakdown Course 2021